एमाले एक्लैले सरकार चलाउने ! पार्टीभित्र गोप्य छलफल सुरु::mirmireonline.com
एमाले एक्लैले सरकार चलाउने ! पार्टीभित्र गोप्य छलफल सुरु
२७ मंसिर,काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने भएको छ । अझै सबै क्षेत्रका अन्तिम परिणाम आएको छैन, समानुपातिक तर्फको मत गणना जारी छ । तरपनि अहिलेसम्मको परिणामले एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने निश्चित भएको छ । समानुपातिकमा पनि एमाले भन्दा नेपाली काँग्रेस पछि छ । पहिलो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेभन्दा काँग्रेसलाई समानुपातिकमा निकै बढी भोट आएको थियो ।